Izinselelo zemvelo zalo nyaka nalawo azayo! | Ukuvuselelwa Okuhlaza
UTomàs Bigordà | | Ukonga amandla, I-Ecology, Amandla avuselelekayo, Imvelo, Ubuchwepheshe obusha
Kunanini ngaphambili emlandweni wesintu, sinalo izandla zethu ikusasa kweplanethi njengoba siyazi futhi sibhekene nochungechunge lwezinselelo zemvelo.
Ngokulandelayo sizobona ukuthi ziyini lezi zinselele nokuthi enzima ezingaletha.
1 Izinselelo eziyinhloko zemvelo
2 Ukwanda kwabantu
3 Ukuxhashazwa ngokweqile kokudoba
4 Ukuqedwa Kwemithombo Yezimbiwa
5 Ikusasa lomhlaba ezandleni zethu
Izinselelo eziyinhloko zemvelo
Eminyakeni eyishumi edlule sibona izinselelo eziningana ezithi songela ikusasa lethu njengomphakathi:
Ukukhula isheshisiwe labantu.
El ukukhathala kwemithombo yamaminerali.
Ukusetshenziswa ngokweqile kwe- Izinsiza zokudoba nokuminyaniswa kwezilwandle.
Ukwanda ku ukungcola yenhlabathi namanzi.
Ukuqothulwa kwamaningana izinhlobo.
Ukukhishwa okukhulu kwe- amagesi abamba ukushisa ukushisa okushisa okubangela ukufudumala kwembulunga yonke.
Ngo-Okthoba 30, 2011 sidlule izakhamuzi eziyizigidi eziyizinkulungwane eziyisikhombisa emhlabeni.
Ngo-2016 base bevele sebedlulile ku-7400 kanti njengamanje sesivele singaphezulu kwezigidi ezingama-7500 (7.504.796.488 ngesikhathi sokubhala lokhu Ama-Worldometers).
Ngokwezibikezelo ezisemthethweni, ngo-2050 futhi uma kungenakushintsha lutho, kungenzeka ukuthi kufinyelelwe ku-10.000 billion.
Abantu abayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-10.000 abazofuna ukudla, ukuphuza, ukugqoka, ukuhamba, ukulima, njll.
Lokho kufaka ingcindezi ezinhlelweni zemvelo nezinsizakusebenza ngendlela engakaze yenzeke ngaphambili. Isibonelo semiphumela lokhu kwanda kwabantu okukhona kuyo izimiso zemvelo sinakho ekudobeni.
Ukuxhashazwa ngokweqile kokudoba
Njengoba ukunambitheka okuphekwayo kukhule ngokwandayo i-epicurean futhi umhlaba wonke, ukuthanda i-sushi nokudla kwasolwandle kanye nezinhlanzi sekukonke.
Amazwe afana neSpain lapho inhlanzi yayivele iyingxenye kubalulekile ekudleni kwethu, inyuse lokhu kusetshenziswa kuphela futhi yakwenza kwaba kubanzi kakhulu.
Ukuthuthuka kwengqalasizinda kwenze ukuthi kube lula uku udle izinhlanzi ezintsha noma kuphi ezweni. Kodwa lo mkhuba uye wanda kuwo wonke umhlaba, okwenza ukuba amabutho okudoba ayodoba ezindaweni zokudoba ezikhula ngokuya zikhula.
Inkinga ukuthi lesi sidalwa sithinte amandla okuzala olwandle, ukuze its ileveli ephezulu ukubanjwa kwazo zonke izindawo zokudoba zeplanethi.
Lokhu kungumphumela ovela njalo ngendlela efanayo; Njengoba ukudotshwa kukwanda endaweni ethile, ukukhiqizwa kwezinhlanzi kuleyo ndawo kuyanda kuze kufike ezingeni eliphezulu ngemuva kwalokho ukubamba kuyancipha futhi kungabuyeli finyelela esiphezulu futhi.
Yebo, ngo-2003 lase lifinyelele ezingeni eliphakeme kakhulu kuzo zonke izilwandle zomhlaba. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi amapulazi ezinhlanzi andile njenge- okunye ekunciphiseni ukudotshwa kwezilwandle.
Lokho futhi kuyincazelo yalokho esingakuthola izinhlobo eziningi kakhulu kubadayisi bezinhlanzi ababengadliwa kuze kube yiminyaka embalwa edlule.
Ukuqedwa Kwemithombo Yezimbiwa
Iplanethi yethu inobukhulu bayo kanye no ubuningi wezinsizakusebenza ezimisiwe neziphelile. Indlela yokusetshenziswa kwezinsizakusebenza, zenze sengathi zikushaya indiva ukuthi zizophela, ngaphezu kwe kokunganaki, akulungile ngqo ezizukulwaneni ezizayo.
Uma sekukhishwe amaminerali phansi angeke esakwazi ukukhishwa. Ngakho-ke i- ukusetshenziswa okufanele ukuthi kwenziwa kubaluleke kakhulu nokuthi okuwukuphela kwesimo esinengqondo ngekusasa ukusungulwa kohlelo lwe umnotho isiyingi sangempela ngendlela yokuthi lezi zinsizakusetshenziswa kodwa zisetshenziswe.
Lokhu akusho nje ukuthi izinto ziphinde zenziwe kabusha, kepha nokuthi uma zikhona ukuklama nokukhiqiza Sekuvele kubhekelwe ukuthi ngemuva kokusebenzisa lezi zinsizakusebenza ezingavuseleleki kumele zikwazi ukusetshenziswa futhi.
Ikusasa lomhlaba ezandleni zethu
Iqiniso ngukuthi phezu kwazo zonke lezi zinselelo zemvelo ezibonakala zingenakwenzeka futhi ngaphandle kwazo zonke lezi zinsongo ezibhubhisayo, namuhla sinakho amathuluzi amaningi kunanini ngaphambili ukunqoba zonke lezi zinselelo.
Ulwazi lokuthi kukhona namuhla okwenzekayo kithina, kungani kwenzeka kithina nokuthi sizithola kanjani izixazululo kukhulu kunanini ngaphambili.
Siphethe amathuluzi wokukhulisa a enye indlela yokuthuthukisa. Mhlawumbe ngenxa yalesi sizathu nangolunye uhlobo lokungaqondakali kwaphezulu, yithina okufanele sibhekane nenselelo enkulu kunazo zonke abantu abangakaze babhekane nayo ngaphambili:
Ukuguquka Kwesimo Sezulu kubangelwa ukufudumala kwezwe kubangelwe yimizamo yethu yokukhipha i-carbon dioxide ngendlela ethusayo eminyakeni eyi-150 edlule.
Izindaba ezinhle ukuthi yithi isizukulwane sokuqala ukuba namathuluzi esinawo okunqanda lolu songo futhi siqondise indlela yethu yokuhlala kuleplanethi siye kuleyo evimbela i- imiphumela emibi kakhulu.
Okubi wukuthi mhlawumbe sizoba ngabokugcina ngokwazi ukukusebenzisa ngeziqinisekiso zempumelelo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Amandla avuselelekayo » Izinselelo zemvelo zango-2017
Cishe ama-30 amacala asalindile okusika emandleni avuselelekayo e-ICSID